Umvundla weCapricorn: Umthandi othanda i-Chinese Western Zodiac - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Umvundla weCapricorn: Umthandi othanda i-Chinese Western Zodiac
Umvundla weCapricorn: Umthandi othanda i-Chinese Western Zodiac
Nabani na owazalwa phakathi kukaDisemba 22 noJanuwari 19 yiCapricorn.
Iminyaka yoMvundla yile: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
Ezona mpawu zimbini zibonakalayo zothando lwabantu kukuziqambela izinto kunye nokuzimisela okuzenzekelayo.
Umfazi okrelekrele weCapricorn Rabbit ngamanye amaxesha unokungazithembi.
Indoda enobunono yeCapricorn Rabbit iseta umgangatho ophakamileyo kuye nakwabo bajikelezileyo.
Ukuzola kunye nokuthamba kwesilwanyana somvundla waseTshayina kuyaphuculwa ngobukrelekrele kunye nokulumkisa iCapricorn.
Ngenxa yoku, ungalindela ukuba abemi beli babe madolw 'anzima, kodwa ke, baya kothusa wonke umntu ngamathuba abawathathayo kunye nomoya wabo wokuzifihla ofihlakeleyo.
Ubumnandi boMvundla weCapricorn
Umvundla weCapricorn ngumntu onembono eqaqambileyo ngobomi, ephila ngokupheleleyo kwaye onwabele wonke umzuzu wabo. Kukho izinto ezimbalwa ezenza ukuba lo mthonyama abe ngumntu ophakathi kwaye olungeleleneyo, ngokubhekisele kwindlela yakhe yokujongana nezinto.
Akangxami kwaye angabinangqondo, kodwa engoyisi kakhulu kwaye engazithembi, wenza izinto ngendlela yakhe.
Ukwazi ukuba akukho nto iza ngaphandle kwesizathu, kwaye izinto ezincinci zezona zinto zibaluleke kakhulu, bayabulela kakhulu kwaye bayaliqonda ixesha elininzi.
Ngenxa yesimo sengqondo esinethemba nesokugcoba ebusweni, ixesha elininzi, iCapricorn Rabbits ayifane icaphuke okanye imile, kodwa lonto ingenzeka ngokunjalo.
Iimpawu eziPhezulu: Uhlalutyo, ubushushu, ulumke, ulukhuni.
Xa iingxaki zibonakala zinzima ngakumbi ukusombulula, bahlala bekhathazekile kwaye becaphuka de umba usonjululwe.
Nokuba kungenxa yemizamo yobuqu okanye ngokucela uncedo lomntu ukuba akukho olunye ukhetho, lo mthonyama ngokuqinisekileyo uza kuphuma phambili, koku akukho mathandabuzo.
Ngokubanzi ukuba nomonde nokunyamezela, akanangxaki yokuzihambela ngokwakhe kweli hlabathi likhohlakeleyo, kwaye wonke umntu uyalibona eli candelo kwangoko.
Kodwa ezantsi, ukhathazwa kukungazithembi okuninzi kunye neziphene awaziyo kwaye azama ukuzifihla ixesha elininzi.
Ngenxa yeso sizathu, iCapricorn Rabbit ayizukuba ngumntu othembekileyo okanye ophumayo, othanda iingxoxo ezinde nezinyanisekileyo kunye nabahlobo abambalwa, ngaphezulu kwengxoxo zoluntu kunye neencoko.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, aba bemi bakhetha ukuba kumaqela amancinci abahlobo abasondeleyo, kunokuba babe baninzi, mhlawumbi ngenxa yokuba abanako ukubonisa umdla ofanelekileyo kwizinto abangazichaphazeli ngqo.
Iimpawu ze-zodiac zika-Agasti 30
Usapho yenye into iyonke, kwaye ayinamsebenzi ukuba yintlanganiso phakathi kwamalungu osapho amaninzi, akukho nto inokuphazamisa.
Ukuba nengqondo esebenzayo kunye nepragmatic, imicimbi yekhaya enjengokuhombisa okanye ukubonelela ngeyona nto igcinwe ilula ngokulula. Intuthuzelo, ngaphezu kwako konke, yeyona nto ibalulekileyo ekufuneka umntu eyiqwalasele.
Njengokuba ixesha lihamba kwaye efumana amava kunye nolwazi, le ndalo iya kuba nakho ukufumana iindlela ezintsha zokuzibuyisela kumdlalo nakwindawo ebonakalayo.
Ukuqhubela phambili kobungcali kunye nenqanaba lentlalontle yenye yezinto ezimbalwa ebomini bakhe ezinokufumana ukonyuka okukhulu, ngenxa yokuzithemba kunye nokuzimisela awayekufumene ngaphambili.
Ngelixa kugxilwe ngokwenene kwaye kugqityiwe ukwenza amanyathelo amakhulu ukuya esiphelweni, kukho inkcukacha enye encinci enokutshintsha yonke into ibe mbi.
Ngokusisiseko, aba bemi bomelele kakhulu kwaye abanakubonakala ngathi banokuziqhelanisa ngokukhawuleza notshintsho ngequbuliso, oku kukhokelela kukothuka kunye noxinzelelo.
Imisebenzi egqibeleleyo yeCapricorn Rabbit: ezoQoqosho, ukuBhala, ezePolitiko, ezeMfundo.
Usizi kunye nokudakumba akukho nto ngaphandle kwesiqhelo ukuba kukho into engalunganga ngobomi babo, nokuba lolwalamano olusenyongweni, iingxaki zemali okanye imiba yezempilo.
Ngumkhwa wale ndawo ukuba uzibaxe izinto ngokungeyomfuneko kwaye uzixhalabise ngezona zingabalulekanga, zihlala ngaphandle kwesizathu esibambekayo. Kwaye oku kukhokelela kwiingxaki ezingeyomfuneko, ngokucacileyo.
Kwaye oku bekungonelanga, banoxanduva lokuziva benovelwano olunamandla nabanye ukuya kwinqanaba elinengxaki, bathathe neengxaki zabo. Ngaba kuye kwamangaliswa ukuba imivundla yaseCapricorn ixinzeleleke kwaye iyacaphuka amaxesha amaninzi? Ngokucacileyo akunjalo.
Nangona kunjalo, ayisiyonto ebaluleke kangako njengoko ibonakala, kwaye ngokuqinisekileyo ayihlali isigxina. Kufuneka nje bawuqonde lo mbandela kwaye bathethe ngawo nomntu osondeleyo. Oku kuya kuphakamisa ilitye esifubeni kwaye kuncede kakhulu.
Eyona nto ichaza ngcono uMvundla weCapricorn kukukhetha kunye nokubakho okufihliweyo. Uyakhetha kuba akahlali nje nabani na okwaziyo ukuphakamisa 'imimoya' yakhe nokumlukuhla.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwaba bantu luphawu, ubuntu, ukuthanda izinto ezifanayo kunye nemibono, iincoko ezinzima kunye nokuqonda.
Kwelinye icala, angangoyena mlingane ubalaseleyo, onothando, onothando kwaye angaze avumele nantoni na ukuba iphume esandleni.
Eyona idibana ne: Taurus Pig, Virgo Ram, Virgo Pig, Scorpio Dog, Gemini Ram.
Rhoqo kunokuba kunjalo, ukungahambi kakuhle okuncinci kunokukhokelela ekubeni akrobe kancinci, kulandelwe kukujonga, ukuba ithamsanqa lakho lilungile, okanye uqhekeko olupheleleyo ukuba iinkwenkwezi azingqinelananga ngokuchanekileyo.
Ngomvundla weCapricorn, ukuba semathandweni yinkqubo yendalo, kwaye nangaphezulu koko, kubalulekile ukuba uphile. Ngokuqinisekileyo, bafuna ukuziva bethandwa ukuba likho ithuba lobomi obonwabisayo nobonwabisayo.
Enye yezinto ezenza lo mthonyama ukuba abaluleke kakhulu kwaye abe yinto ethandabuzekayo lolu luphawu ngqo, ukunxanelwa kwakhe ukuthandana nothando.
i-virgo man libra ulwalamano lomfazi
Ukuqhotyoshelana kakhulu kunye nokuhlanya ngokugqithiseleyo ngobukho bezinye kukhokelela ekubeni azise amathuba amaninzi okudibanisa okunzulu, njengokuhamba kwiindawo zothando.
Ixesha alize lichithwe xa lisetyenziselwa ukuqhubela phambili ukuphucula amava okuthandana kwaye ube nexesha elimnandi nomntu omthandayo.
Iimpawu zeCapricorn Rabbit Woman
Abafazi bokuphakama kwengqondo kunye nezakhono zokujonga kakhulu, banakho konke okulungiselelwe bona, ukuba kukho intando eyaneleyo kunye nokuzimisela ukwenza oko kunokwenzeka.
Ukungabikho kokuzithemba ngamanye amaxesha, unxibelelwano lwabo lwentlalo ngamanye amaxesha luyaphazamiseka ngenxa yoku. Ukuzama ukoyisa le ngxaki ngokuqinisekileyo kuya kwenza izinto zibengcono kule ndawo yokujonga.
Ngobukrelekrele obukhulu buza nobunzima obukhulu, kuba xa sele unamandla okwahlula kunye nokubona inyani ukuba iyintoni na, iimvakalelo zokudana okanye uloyiko lunokuvela. Le yenye yeengxaki eziphambili naba bantu.
Ngenxa yokuba baziqonda izizathu zabo kunye nezabanye, indlela umntu enza ngayo kwaye kutheni, abasenako ukuyeka kodwa baqonde usizi kunye nenkohlakalo yako konke.
Enye yeengxaki ezinkulu zowesifazane waseCapricorn Rabbit kukuswela amandla kunye namandla omlinganiswa.
Oku kukhokelela ekuthandabuzeni xa kungafanelekanga ukuba kubekho, kunye nokungaqiniseki ngexesha elibaluleke kakhulu kumaxesha, elihlala lingena kwimithambo-luvo yabantu ababangqongileyo. Ubudlelwane bobuqu buchaphazeleka ngokunzulu yile ngxaki.
Akumangalisi ke, ngenxa yokuba benobukrelekrele obunamandla nobukrelekrele, aba bantu badlula ngaphaya kweminqweno yokuthanda izinto eziphathekayo kwaye bajonge kwinto enzulu ngakumbi.
Ukuziphuhlisa kunye nokuqhubela phambili ngokomoya yindlela yokuhamba, kodwa oko akuthethi ukuba abanalo ulwazi konke konke xa kuziwa kwimicimbi yomsebenzi kunye nemali. Ayisiyonto nje abayibona ibalulekile.
Abantu abadumileyo phantsi komqondiso weCapricorn Rabbit: uNaya Rivera, uTiger Woods, uBradley Cooper, uKirstie Alley, uCharo.
Iimpawu zeCapricorn Rabbit Man
Amadoda omvundla aseCapricorn anempawu ezimbini. Kokunye, bazolile kwaye bayasebenza abantu abanembono efanelekileyo ngezinto, ngelixa bekwimvakalelo entle kwaye bethambile ngexesha elinye.
Nangona ayisiyo inkqubo ngaxeshanye esithetha ngayo, bacelwa umngeni ngokuhlala kumanqanaba amabini ahlukeneyo, ahlaselwe kukuphikisana okubini, ukwenza ngokungahambelani okanye ngokwasemphefumlweni. Unokuthi konke kuxhomekeke kwimeko enikiweyo kwaye ziimeko ezibanika umbono olungileyo wokuba yeyiphi indlela emayikhethwe.
Kubo, ubuhle yenye yezona zinto zibalulekileyo ebomini, ukusuka kwiindawo ezininzi zokujonga. Kwelinye icala, yinto ekholisa izivamvo kwaye inike ukoneliseka okuthile kunye novuyo, ukukwazi ukungqina kunye nokunxibelelana nento okanye umntu omhle.
Ke ngoko, ngabantu abathandanayo nabanothando, inkqubo yokuwela kumntu omfutshane kwaye onamandla kakhulu. Ngokwesiqhelo, ukuba omnye umntu uyangqinelana nemigangatho yabo yobuhle, kuko konke oko kuphelele apho.
Ngapha koko, amadoda aseCapricorn Rabbit ngabantu abachongiweyo ngokumangalisayo abacwangcisa ikamva labo ngokucophelela kwaye banemigangatho ephezulu yabo.
Inokuba seso sizathu sichaza ukuba kutheni kungekho mntu ubonakala njengomdlalo wabo, kuba akukho mntu ulunge ngokwaneleyo.
Ewe izinto ezininzi azifumaneki ngokulula, kwaye kuya kufuneka bazibhokoxe kwaye basebenze nzima ukuze baphumelele.
Xa uthetha ngobudlelwane, lo mthonyama uthanda ukungasihoyi isizathu kunye nengqondo xa ukhetha umntu njengeqabane.
Ukuzithemba ngeemvakalelo nangokwemvelo kuphela kunokuba yindlela efanelekileyo kwezinye iimeko, kodwa le ayisiyiyo enye yazo. Emva kwexesha, oku kungakhathali kwabo kuye kukhokelele kwintlekele, njengoko besazi ngomahluko wokucinga phakathi kwabo babini.
Uhlalutyo olunokujonga into ekuThetha ukuba yiCapricorn
Umvundla: Isilwanyana esincinci seTshayina seZodiac
IVirgo kaSeptemba 2019 i-Horoscope yenyanga
Juni 7 Imihla yokuzalwa
ipisces indoda kunye nomfazi wegemini
ukuqala ubudlelwane bomhlaza womntu u-aries mfazi
uphawu lwe zodiac lwango feb 22
uphawu lwe zodiac lwedisemba 15